Anglegrindercare | Fanontaniana sy Valiny Anglegrindercare
Ahoana ny ahalalako fa misy tsy fetezana ny Meuleuse d’Angle ampiasaiko?
Raisin’ny Bosch Power Tools an-tànana maimaimpoana ny fijerena akaiky ny fomba fampitandremana tokony arahina rehefa mampiasa Meuleuse d’Angle Large amin’ny isa voafaritra. Voakasik’izany ny môdelina Séries GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 ary PWS 2000 izay natonta tao anelanelan’ny volana Jiona ka hatramin’ny Aogositra 2016, ary koa ny môdely GWS 24-230 JVX Professionnel misy hisatra, natonta tao anelanelan’ny volana Febroary ka hatramin’ny Octobra 2016:
Ireto manaraka ireto indray dia mahakasika firenena sivy (Alemana, Frantsa, Repoblika Tchèque, Polöna, Espana, Romania, Rosia, Inde, Bélarus):
Ireo Meuleuses d’ Angles môdely GWS 24-230 JVX Professionnel nasiana fanamboarana tao anelanelan’ny volana Janaary ka hatramin’ny Novambra 2016 koa dia isan’ireo voakasik’ity fampitandremana sy fanoloana fitaovana ity.
Mba ahalalanao hoe mety misy tsy fetezana ny Meuleuse d’Angle anao na tsia, fantaro ny nomerao an’ilay fitaovana sy ny numéro de série-any. Azonao atao ny mamantatra izany amin’ny alalan’ny fitadiavana ilay soratra ao amin’ilay fitaovana. Azonao atao ny mamerina mitsidika ny pejy Voalohany amin’ny tranokalanay raha hijery ny fomba fitadiavana izany soratra izany ianao. Azonao atao eto ihany koa ny mamantatra eo noho eo raha misy olana ny fitaovanao na tsia. Vonona lalandava ny mpiara-miasa ato aminay hamaly ny antsonao amin’ireo antsipiriany momba ny fifandraisana voalaza etsy amin’ny pejy voalohan’ny tranokala.
Nahoana ny Bosch Power Tools no mandray an-tànana ny fijerena akaiky ny fomba fampitandremana tokony arahina amin’ny fampiasana Meuleuse d’ Angle?
Nandritra ny ezaka nataonay ho fanatsarana hatrany ny kalitaon’ny fitaovana arosonay ho an’ny mpanjifa dia hita fa, nohon’ny antony ara-pitaovana, miala hoazy ilay ’disque de coupe’ rehefa ampiasaina elaela ilay Meuleuse d’Angle. Ekenay noho izany fa mety hiteraka loza na ratra ny fisian’io tsy fetezana io raha sanatria mitranga izany.
Mba hampitombona ny fandraisanay andraikitra manoloana anao sy ny mpanjifa rehetra, nanapa-kevitra izahay ny hampitandrina anao sy hanamboatra ny tsy mety amin’ireo fitaovana ireo – ka raha tsy misy azo atao ankoatr’izay- dia vonona izahay ny hanome anao fitaovana vaovao ho solony. Mazava hoazy, maimaimpoana ny fanoloana na fanamboarana ny tsy mety amin’ireo fitaovana ireo.
Inona no tokony ataoko raha voakasik’io fampitandremana io ny Meuleuse d’Angle ampiasaiko?
Rehefa hita fa misy tsy fetezana ilay izy, tsy azonao atao intsony ny mampiasa ilay Meuleuse d’Angle no tsy azonao omena olon-kafa ihany koa. Ny Bosch Power Tools dia manamboatra ny simba maimaimpoana na – raha tsy misy azo atao intsony noho ny antony ara-teknika – dia manome anao fitaovana vaovao ho solon’ilay misy olana. Mifandraisa aminay amin’ny fampiasana ireo laharana sy adiresy voasoratra etsy amin’ny pejy voalohan’ny tranokala; ho azavainay amin-kafaliana aminao ny fomba atao raha hampanamboatra na hanolo vaovao ilay fitaovana amin’ny firenena misy anao.
Efa nampanamboarako olon-kafa ny Meuleuse d’Angle-ko. Mbola voakasik’izany ve ilay izy?
Hovaliana arakaraka ny firenena –
a) Raha novidina tany Alemana, Frantsa, Repoblika Tchèque, Polöna, Espana, Romania, Rosia, Inde, Bélarus ilay fitaovana; mety ho voakasika ihany koa mantsy ireo fitaovana GWS 24-230 JVX Professional nasiam-panamboarana teo anelanelan’ny Janaary sy Novambra 2016. Raha atambatra, dia fitaovana 100 farafahabetsany no voakasika. Bosch Power Tools dia manolotra ny hanolo na hanamboatra maimaim-poana ireo fitaovana voakasika.
b) Raha novidina tany amin’ny firenena hafa ankoatra ireo voatanisa ireo ilay milina fandamalama, dia a), tsy voakasik’izany ireo fitaovana nandalo fanamboarana na fikojakojana.
Isan’ireo voakasik’ity tranga ity ny Meuleuse d’Angle-ko nefa mbola mandeha tsara. Mbola mila mamerina izany ve izaho?
Eny, mila aterinao ety aminay ny Meuleuse d’Angle ampiasainao io. Rehefa hita fa misy tsy fetezana ilay izy, tsy azonao atao intsony ny mampiasa ilay Meuleuse d’Angle no tsy azonao omena olon-kafa ihany koa. Ny Bosch Power Tools dia manamboatra ny simba maimaimpoana na – raha tsy misy azo atao intsony noho ny antony ara-teknika – dia manome anao fitaovana vaovao ho solon’ilay misy olana. Mifandraisa aminay amin’ny fampiasana ireo laharana sy adiresy voasoratra etsy amin’ny pejy voalohan’ny tranokala; ho azavainay amin-kafaliana aminao ny fomba atao raha hampanamboatra na hanolo vaovao ilay fitaovana amin’ny firenena misy anao.
Afiriana angaha ny mety ahazoana ny solon’ilay fitaovana?
Ezahinay hatrany ny manamboatra ny tokony ahitsy amin’ilay fitaovana na koa manome anao vaovao farak’izay aingana tratranay.
Manomboka oviana no tokony iantsoako anareo raha manana fitaovana voakasik’izany aho?
Tsy misy fetra ny daty mety iantsoanao anay raha ny momba ity fampahafantarana ity.
Mifandraisa aminay amin’ny fampiasana ireo laharana sy adiresy voasoratra etsy amin’ny pejy voalohan’ny tranokala raha misy fanontaniana tianao apetraka aminay. Ho valinay amin-kafaliana izany.
Pejy voalohany Imprint